‘इलिगल पर्यटन र इलिगल गाइड सञ्चालनमा रोक लगाउँछौं’, टान सिइओ महत
टिम्स हिसाब फस्र्यौट नहुँदा दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत बाधा
निर्माण सञ्चार, काठमाडाैं । ट्रेकिङ एजेन्सी व्यवसायिक कम्पनीहरुको छाता संगठन हो ।यसले व्यवसायिक पर्यटन पदयात्राको क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्या र समस्या समाधानतर्फ सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने काम गर्दछ । टान र पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर महतसँग गरिएको विशेष कुराकानीः
टानले कुन कुन संस्था तथा क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने गरेको छ ?
नीति निर्माणका लागि हामीहरु नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय लगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्छ । हाम्रो मुल उद्देश्य हाम्रा व्यवसायीहरुको हक हितको लागि कार्य गर्ने हो । सम्बन्धित सरकारी संस्था समक्ष पर्यटन व्यवसायीहरुबाट लागु भएका नीतिहरुको सञ्चार गर्ने र पर्यटन व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माणका लागि पहल गर्नु हाम्रो काम हो ।
टानको मुख्य आय स्रोत चाहिँ के हो नि ?
हाम्रो मुख्य आय मेम्बर सिप फि हो । यसबाट आएको रकमले हामी हाम्रो कार्यलयका दैनिक खर्च तथा कर्मचारीको तलब भक्ताजस्ता कुराको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ ।
टिम्सको बारेमा बिवाद हुने गरेको छ नि यसको बारेमा बताइदिनुस् न के हो हो टिम्स ?
पर्यटन बोर्ड सरकारको मातहतबाट निर्माण भएको संस्था हो । टिम्स भनेको कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरलाई सरकारले लागु गरेको रकम उठाउने र त्यसबाट केही प्रतिशत लिने गरी गरिएको सम्झौतालाई टिम्स भनिन्छ । पर्यटन बोर्डले आफ्नोेभन्दा टानको सञ्जाल पर्यटन क्षेत्रमा बढी छ भनेर पर्यटन बोर्ड र टानको बीचमा एउटा एमओयु भयो त्यो एमओयुको आधारमा टानले टिम्स कार्ड पाएको छ ।
विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुले तिरेको राजस्वको केही प्रतिशत हामीले टिम्स कार्डको मातहत सरकारबाट पाउछौँ । टिम्सको बापतको रकम पहिला प्रक्रिया नपुर्याइ खर्च गरियो । त्यसैको विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । टिम्सको आम्दानी हामीले आफ्नो खुसी खर्च गर्न मिल्दैन ।
सरकारको मातहतमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि यो विवादमा छ । २ करोड जति पैसा टिम्समा फ्रिज भएको छ जसको कारण टानलाई दैनिक कार्यलय संचालन र तलब भक्ता दिन पनि समस्या हुने गरेको छ ।
पहिलेदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेका समस्या के के हुन ? र ती समस्या समाधान गर्न नवगठित नेतृत्वले के गर्नुपर्ला ?
हामीसँग रहेको मुख्य समस्या भनेको नै टिम्सको हिसाब फस्र्यौट नहुनु हो । यो लामो समयदेखिको समस्या हो । यसको समाधानका लागि लामो समयदेखि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
अब यो समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ । अहिलेसम्म रहेको टिम्सकार्ड लिन टिम्स कोष, पर्यटन बोर्ड तथा टानमै आउनुपर्ने अन्झटिलो प्रक्रियालाई डिजिटलाइज प्रविधिमा लगी समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस प्रक्रियालाई अघिल्ला नेतृत्वले गर्दै आएको र अब नव नेतृत्वले पूरा गरी लन्च गर्नुपर्ने भएको । यसको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
पर्यटन मजदुरले काम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा उद्धार, उपचार तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकमजस्ता कुरामा टिम्सले हिसाब फस्र्योट नगर्दा बिरामी र परिवारहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन् ।
नव निर्वाचित कार्यकालमा प्रशासनले गर्नुपर्ने सुधारात्मक कार्यहरु के के छन् नि ?
म प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको हुँदा मेरो काम प्लानिङ गर्ने हो । सबैभन्दा पहिले टान एक्टिभिटीको क्यालेण्डर बनाउनु पर्छ । र उक्त क्यालेण्डरका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बताइ सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ ।
टानले गर्ने कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक सहायता गर्नुपर्छ । हामीले टानको उद्देश्य अनुरुपका कार्यक्रम गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामी बीना प्लानिङ, बीना क्यालेन्डर कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ । हामीले जानकारी विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पदयात्रासँग जोडेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आजभोलि जसरी गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण पदयात्रा भइरहेका छन् । विकास निर्माण, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक भित्रिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय त्यस्ता सम्पत्तिहरु नासिँदै गएका छन् । नेपाललाई पदयात्राका लागि विकास गर्दा भौतिक संरचना, सांस्कृतिक सम्पदा र वातावरणीय क्षेत्रलाई ख्याल राखेर सडक तथा बाटो निर्माण गर्नुपर्छ ।
टानले हिमाली पदयात्रा बाहेकका अन्य क्षेत्रको पर्यटन यात्रामा काम गरेको देखिँदैन किन नि ?
हामी पदयात्रा पर्यटनमा लागेका छौँ । हामीले ५ हजार देखि ६५ सय मिटरसम्मका पहाडहरुको भ्रमण गर्ने गर्दछौँ । ठूला हिमालहरुमा चाहिँ नेपाल माउन्टेण्ड एसोसियसनले हेर्छ ।
हामीले साहसिक, कठिन र लामो सयमको यात्रालाई प्राथामिकतामा राखेका छौँ । जसमार्फत पदयात्रा गर्दागर्दै त्यहाँभित्रको संस्कृति, रहनसहन, भुगोल, इतिहास र भेषबुषाको जानकारी लिन सक्ने प्रकारको कठिन र लामो समयको पर्यटन पदयात्रालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गछौँ ।
टानको तर्फबाट पर्यटन व्यवसायीमूखी कार्यबारे प्रस्ट पारिदिनुस् न ।
आर्थिक संकटका कारण हामीले यो संस्था चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि पर्यटन बोर्डले चासो नदिँदा हामीलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । हामी आर्थिक हिसाबमा सुदृढीकरणतिर जाने र सरकारबाट उठाएको राजस्व, टिम्स खरिदजस्ता समस्या समाधान गरेर टान मजबुत बन्नुपर्छ ।
पर्यटन व्यवसायभित्र भइरहेको इलिगल पर्यटन, गाइड सञ्चालनजस्ता कार्यलाई बन्द गरेर विदेशी पर्यटकलाई स्थानीय नेपाली गाइडसहितको आधिकारीक पर्यटन गराई त्यस क्षेत्रमा सहभागी श्रमिकको आर्थिक अवस्थालाई पनि सहयोग गर्ने र स्थानीय स्तरलाई पनि रोजगार दिनेतर्फ अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंबाट गाइड लिएर जाँदा त्यहाँको वातावरणीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अवस्थाको बारेमा राम्रो जानकारी नभएको कारण पर्यटकहरु पूर्ण सन्तुष्ट नहुने हुँदा पुनः फर्केर उक्त स्थानमा नआउने हुँदा त्यसमा ख्याल स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
सोमबार ११, मंसिर ०७४